Ny fomba fahandro Krismasy Thermomix 10 tsara indrindra hanaovana ireo fialantsasatra | ThermoRecipes
Ny fomba fanamboarana Krismasy Thermomix 10 tsara indrindra hanaovana ireo fialantsasatra ireo
Irene Arcas | | Navidad, Resipeo thermomix
Efa manakaiky ny Krismasy ary isika rehetra dia mieritreritra momba ny menu Krismasy izay harahintsika amin'ity taona ity. Betsaka aminareo no mangataka aminay mba hanamboarana fomba fahandro mahazatra kokoa ary ny hafa kosa mba hahitana fomba vaovao kokoa. Noho izany, nanoratra an'ity lahatsoratra ity niaraka tamin'ny Top 10 amin'ireo fomba fahandro Krismasy nahomby indrindra tao amin'ny bilaogy.
Manantena izahay fa tianao izy ireo! Fa ny azonay antoka dia ny hanomezan-dry zareo hevitra anao hahagaga sy hampifaly ny olona ao amin'ny fianakavianao.
NAMANA KRISTIANA MERRY ARY MANKASITRAKA MANANJAKA NY FAHA-herintaona mahery miaraka aminay !!
1 Sokola mafana
2 Hazo krismasy
3 Mofomamy mpanjaka
4 Minono kisoa amin'ny vay roa
5 Cannelloni miaraka amin'ny hena sy pate
6 Mifohaza any cava
7 Lasopy hazan-dranomasina
8 Salady krismasy rosiana miaraka amin'ny udd
9 Takolaka Bourguignon
10 Mofomamy spaonjy polvorones
Isaky ny Krismasy dia lasa fomba fanao kokoa ny fananana sôkôla mafana mafana hanombohana ny andro voalohany amin'ny taona. Miaraha amin'ny manankarena roscon de reyes, un Panettone na ny sasany Churros ary tena fampisehoana izany.
Fomba fahandro tena tsara sy tsara tarehy kokoa ho an'ny fankalazana ny Noely. Handravaka ny latabatrao izany, Io no ho mpanjakan'ny tsindrin-tsakafo ary ho tian'ny ankizy kely izany ankafizo ity mamy matsiro ity. Tsindrin-tsakafo vita amin'ny hatsaran-tarehy.
Miaraka amin'ny tsiro sy fikarakarana ny zavatra vita an-trano rehetra. Resipeo lava nefa tsotra miaraka amin'ny valiny mahavariana. Ianao dia ho raiki-pitia amin'ity Krismasy nentim-paharazana mamy ity, noho ny tsiro sy ny endriny.
Fomba fahandro mahavariana ankafizo ny vahininay miaraka amina lovia nentin-drazana fa tena tsotra. Horaisintsika ny fahandroana fandrahoana roa sosona: voalohany handrahoinay anaty kitapo roasting ary, avy eo, hofaranay amin'ny gratin matsiro ao anaty lafaoro. Resipeo tonga lafatra izay azonao omanina mialoha.
Cannelloni miaraka amin'ny hena sy pate
Kilasika amin'ny sakafo Krismasy, tena mahafinaritra. Ireo cannelloni miaraka amin'ny hena sy pate dia tsy mety diso. Haingana sy mora, miaraka amin'ny tsiro mahavarianaRaha tsy te-ho sarotra amin'ny elaborations be ao an-dakozia ianao, tsy misy isalasalana, ity no lovanao.
Ity fomba fahandro hake in cava ity dia lovia matsiro, mety tsara amin'ny fialantsasatra toy ny Andron'ny Noely na amin'ny fety hafa na amin'ny takarivanana miavaka miaraka amin'ny vahiny. A maivana sy mora azo loviaNa izany aza, ny tsiro cava manokana anaovany azy dia tonga lafatra hamadika azy ho lovia tena manokana.
Fanombohana mahazatra ho an'ny Krismasy, matsiro ary tena matsiro. Hanombohana ny vavanao amin'ny lovia mamy izay napetrakay taty aoriana tao amin'ny menio krismasy, Fahombiazana ity lasopy hazan-dranomasina ity. Feno tsiro, nuansa ary firafitra samihafa, lovia 10 io.
Salady krismasy rosiana miaraka amin'ny udd
Fomba fahandro tsy mampino aseho ho toy ny fanombohana. Hanome fikitika iray hafa sy manokana an'ity salady rosiana ity izahay miaraka amina saody sy roe mena izay hanome azy miavaka miavaka. Resipeo mora, izay azontsika omanina mialoha ary izany, tsy isalasalana, dia fahombiazana azo antoka.
Raha te hahita fahombiazana amin'ity Krismasy ity ianao, dia hataon'ireto takolaka bourguignon ireto ho mora aminao. Ankoatry ny maha-mahavariana dia tsotra izy ireo ka gaga anao. Lovia hena izay azonao ampiasaina ho foto-dehibe amin'ity Krismasy ity ary tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
Mofomamy spaonjy polvorones
Nahazo polvozy krismasy ambiny ve ianao? Omano ity mofomamy mahagaga ity hanararaotana ny vatomamy krismasy. Ho hitanao ny endrika mahafinaritra sy malefaka ananany. Ary mety indrindra raha raisina amin'ny dite na kafe ianao hisakafoanana maraina na hanim-py.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Navidad, Resipeo thermomix
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » lahatsoratra » Recipe manokana » Navidad » Ny fomba fanamboarana Krismasy Thermomix 10 tsara indrindra hanaovana ireo fialantsasatra ireo
Tsindrin-tsakafo 9 haingana ho an'ny anio (alin'ny noely)
Resipe hena 10 ho an'ny fankalazana ny Noely